I-Digital Twin-Philosophy yenguqulelo entsha yedijithali- iGeofumadas
Ikhaya/ezintsha/I-Digital Twin-Philosophy yenguqulelo entsha yedijithali
Isiqingatha sabo bafunda eli nqaku bazalwa benetekhnoloji ezandleni zabo, beqhele utshintsho lwedijithali njengoko kunikiweyo. Kwesinye isiqingatha sithi ababone ukuba iminyaka yolwazi ifike njani ngaphandle kokucela imvume; ukukhaba emnyango nokuguqula into esiyenzileyo yaba ziincwadi, iphepha, okanye iiterminal zekhompyuter zamandulo ezingaphenduliyo ngokulula kwiirekhodi zealphanumeric kunye neegrafu zomgca. Into eyenziwa yi-BIM ejolise kwisoftware okwangoku, ngokunikezelwa kwexesha lokwenyani, edityaniswe kwimeko ye-geospatial, iphendula kwiinkqubo eziqhotyoshelwe kwimodeli yeshishini kunye neendawo ezinxibelelana ezisetyenziswayo, bubungqina bokuba isibonelelo seshishini sinokuchaza imfuno yomsebenzisi.
Ezinye iimeko zenguqu yedijithali yangaphambili
I-PC - i-CAD - i-PLM-i-Intanethi-i-GIS-imeyile - iWiki- http- iGPS
Into nganye entsha inabalandeli bayo, abaqhotyoshelwe kwimodeli eguqula amashishini ahlukeneyo. I-PC yayiyinto yobugcisa eyatshintsha ulawulo lwamaxwebhu aphathekayo, i-CAD yathumela kwiindawo zokugcina iitafile zokuzoba kunye newaka lezinto zakudala ezingalinganiyo kwiidrowa, i-imeyile ye-elektroniki yaba yindlela yedijithali ngokungagqibekanga ukunxibelelana ngendlela esemthethweni; bonke baphela belawulwa yimigangatho ngokwamkelwa kwihlabathi liphela; ubuncinci ngokwembono yomboneleli. Olo tshintsho luhlaziyo lwangaphambili lwedijithali lujolise ekongezeni ixabiso kulwazi lwejografi kunye nolwakhiwo lwee-alphanumeric, ezixhasa ngokukodwa amashishini anamhlanje. Imodeli apho olu tshintsho luhamba khona yayiludibaniso lwehlabathi; Oko kukuthi, umthetho olandelwayo we-http esingakhange sikwazi ukwahlukana nawo kude kube namhlanje. Amanyathelo amatsha asebenzise ulwazi, iimeko zonxibelelwano kwaye baziguqula zaba ngamasiko amatsha enkcubeko esiwabona namhlanje njenge-Uber, Airbnb, Udemy, iNetflix.
Kodwa namhlanje, siseminyango yenguqu entsha yedijithali, eya kuyonakalisa yonke le nto.
I-block Chain-4iR-IoT-iTwin yedijithali-Idatha enkulu-i-AI-VR
Ngelixa amagama amatsha ebonakala ngathi zizichazi nje zefashoni ye-hashtag, asinakukhanyela ukuba inguquko yesine yemizi-mveliso isondele, yenzeka ngokwahlukeneyo kuqeqesho oluninzi. I-Intanethi ngeli xesha ithembisa ukuba ngaphezulu kakhulu; ukusebenzisa yonke into ephunyelelweyo ukuza kuthi ga ngoku, kodwa ukophula iiparadigms ezingekhoyo kwinqanaba lentengiso elingasadibanisi kuphela iikhompyuter kunye nokuhamba; Endaweni yoko, idibanisa imisebenzi yabantu kwiimeko zabo.
Akukho namnye u-oracle onokuthi aqinisekise ukuba imeko entsha izakuba njani, nangona ilizwi leenkokheli eziphambili zeshishini licebisa okuninzi kuthi, ukuba samkela imeko ebambekayo kunye nobungqina besazela bokukhula. Eminye imibono, ubungakanani kunye namathuba ale nguqulelo intsha anenxaxheba kwabo banethemba lokuthengisa namhlanje. Oorhulumente, kwiliso elinqongopheleyo leenkokheli zabo, zihlala zibona ukuba ishishini okanye ukuphinda kunyulwe isikhundla sabo kunokumela okwethutyana, kodwa ekuhambeni kwexesha, okuhlekisayo, ngabasebenzisi abaqhelekileyo, abanomdla kwiimfuno zabo, abanokugqibela igama.
Kwaye nangona imeko entsha ithembisa ngemithetho engcono yokuhlalisana, ikhowudi yasimahla ehlala kunye eyodwa, ukuzinza kwendalo, imigangatho ebangelwa yimvumelwano; Akukho mntu uqinisekisa ukuba abadlali abanjengorhulumente kunye nezifundiswa baya kuba kwinqanaba labo ngexesha elifanelekileyo. Hayi; akukho namnye unokuxela kwangaphambili ukuba kuya kuba njani; siyazi kuphela into eza kwenzeka.
Idijithali yedijithali- Ngaba i-TCP entsha / i-IP?
Kwaye ekubeni sisazi ukuba kuyakwenzeka ngohlobo lokuba singaluboni utshintsho oluthe chu, kuya kufuneka silulungele olu tshintsho. Siyazi ukuba kwesi sihlandlo ubulumko kunye nemvumelwano azinakuphepheka kwabo babuqondayo ubuntununtunu bemarike edityanisiweyo kwihlabathi jikelele kwaye apho ixabiso elongeziweyo lingaveli kuphela kwizikhombisi zexabiso lesitokhwe kodwa nakwimpendulo yomthengi osanda kuba nempembelelo. kumgangatho weenkonzo. Imigangatho ngokungathandabuzekiyo iya kudlala eyona ndima yabo iphambili ekuqinisekiseni ulungelelwaniso phakathi konikezelo loyilo lweshishini kunye neemfuno zabasebenzisi bokugqibela.
I-Digital Twin inqwenela ukuzibeka kwifilosofi yenguqu entsha yedijithali.
Ngaba le protocol intsha inqwenela ntoni?
Ukuze i-http / TCIP ibe yinkqubo esemgangathweni yonxibelelwano, ethi nanamhlanje ihlale isebenza ngokuvela kwetekhnoloji kunye noluntu, kuye kwafuneka ukuba iqhubeke nenkqubo yolawulo, ukuvuselela kunye nedemokhrasi / ubuzwilakhe eziqhelekileyo ezingaziwayo. Kweli cala, umsebenzisi akazange ayazi idilesi ye-IP, akusafuneki ukuba uchwetheze i-www, kwaye injini yokukhangela ithathe indawo yesidingo sokuchwetheza http. Nangona kunjalo, ngaphandle kolu shishino luthandabuza ukusikelwa umda kwabalupheleyo emva kwalo mgangatho, useliligorha elaphule iiparadigms zonxibelelwano lwehlabathi.
Kodwa umthetho omtsha ungaphaya kokudibanisa iikhompyuter kunye neefowuni. Iinkonzo zangoku zamafu, endaweni yokugcina amaphepha kunye nedatha, ziyinxalenye yobomi bemihla ngemihla babemi, oorhulumente kunye namashishini. Ngokuchanekileyo sesinye sezizathu zokufa komgaqo wokuqala, ngokusekwe kwiidilesi ze-IP, kuba ngoku kunyanzelekile ukuba uqhagamshele izixhobo ezisuka kumatshini wokuhlamba ekufuneka uthumele umyalezo ogqibe ukusonta iimpahla, kwiimvakalelo zebhulorho Ukubeka iliso kwangexesha lokwenyani kufuneka kunike ingxelo ngemeko yokudinwa kwakho kunye nemfuno yesondlo. Oku kukuthi, kwinguqulelo yokungazi, into esiyibiza ngokuba yi-intanethi yezinto; apho umthetho omtsha kufuneka uphendule.
Umgaqo-nkqubo omtsha, ukuba ufuna ukuba semgangathweni, kufuneka ubenakho ukunxibelelana ngakumbi kunolwazi ngexesha lokwenyani. Njengobubanzi, kufanele ibandakanye yonke indawo esele ikho kunye neyakhiweyo, kunye nokunxibelelana nendalo esingqongileyo kunye nenkonzo ebonelelweyo kwezentlalo, ezoqoqosho kunye nezendalo.
Ukusuka kwimbono yeshishini, umgangatho omtsha kufuneka ujonge njengokumelwa kwidijithali kweeasethi ezibonakalayo; njengomshicileli, indlu, isakhiwo, ibhulorho. Kodwa ngaphezulu kokumodela, kulindeleke ukuba yongeze ixabiso kwimisebenzi; ukuze ivumele izigqibo ezingcono kwaye ke ibe neziphumo ezingcono.
Ngokombono welizwe, umthetho omtsha kufuneka ube nakho ukwenza i-ecosystems yeemodeli ezininzi ezixhumeneyo; Njengazo zonke ii-asethi zelizwe, ukukhupha ixabiso elingaphezulu ngokusebenzisa loo datha ilungele uluntu.
Ukusuka kwimbono yemveliso, umgaqo-nkqubo omtsha kufuneka ubenakho ukulinganisa umjikelo wobomi; yenziwe lula into eyenzeka kuzo zonke izinto, izinto ezinje ngendlela, iploti, isithuthi; izinto ezingenakubonwa ezinje ngotyalo-mali lwesitokhwe, isicwangciso-qhinga, umzobo we-gannt. Umgangatho omtsha kufuneka wenze lula ukuba bonke bayazalwa, bayakhula, bavelise iziphumo, kwaye bafe ... okanye baguqulwe.
Amawele edijithali anqwenela ukuba ngumgaqo mtsha.
Ulindele ntoni ummi kulwakhiwo olutsha lweDijithali.
Ezona meko zintle zokuba kuya kuba njani kwezi meko zintsha, kukungacingi ngento eza kwaziswa nguHollywood kuthi, yabantu abangaphakathi kwi-dome elawulwa yi-elite elawula umsebenzi wabasindileyo be-post-apocalyptic yehlabathi apho kungasenakucaciswa into yokwenene. ukulinganisa okanye kwelinye icala eligqibeleleyo, isicwangciso esinemifanekiso apho yonke into igqibelele kangangokuba iimvakalelo zeshishini lomntu zalahleka.
Kodwa into kufuneka icingelwe ngekamva; Ubuncinci ngeli nqaku.
Ukuba siyayibona kumnqweno wabasebenzisi ababini abakhulu kwisikim seofisi engaphambili, esiya kuthi sibabize Abachaphazelekayo. Umthathi-nxaxheba ofuna ukwaziswa kakuhle ukuze enze izigqibo ezingcono, kunye nommi ofuna iinkonzo ezingcono ukuze avelise ngakumbi; ukukhumbula ukuba lo mntu uchaphazelekayo unokuba ngummi ngokuzimeleyo okanye kwiqela elisebenza kwindima yoluntu, yabucala okanye edibeneyo.
Ke sithetha ngeenkonzo; NdinguGolgi Alvarez, kwaye ndifuna ukwakha ulwandiso kumgangatho wesithathu wesakhiwo sam; eyakhelwe ngubawo ngo-1988 okwangoku, masilibale amagama, ii-brand okanye ii-akhronimi ezingcolisa le meko kwaye masiyigcine ilula.
UJuan Medina uhlala kwisicelo sokuba isicelo samkelwe ngexesha elifutshane, ngexabiso eliphantsi kakhulu, ngokubonakala kakhulu, ukulandelela kunye nobuncinci beemfuno kunye nabameli.
Igunya kufuneka libe nolwazi olwaneleyo lokuvuma esi sigqibo ngokukhuselekileyo, ukwenzela ukuba kulandeleke ukuba ngubani, yintoni, nini, nini kwaye kuphi ukuthumela isicelo: kuba xa esi sigqibo sivunyiwe, kufuneka sibe nobuncinci ubume bokugqibela botshintsho olwenziweyo , kunye nokulandeleka okufanayo ekunikayo. Oku kuphendula kwinqaku elithi "Ukuguqulwa kweziseko ezingqondo ezinobulumko, iindlela zokwakha zanamhlanje kunye noqoqosho lwedijithali zibonisa amathuba okuphucula umgangatho wobomi babemi".
Ixabiso elithathwa yile datha kule meko, igqitha ngaphaya kokuba nemodeli ene-Ultra-eneenkcukacha efanayo yehlabathi liphela; endaweni yoko, sithetha ngokuba nemodeli ezixhunyiwe ngokwenjongo yokungenelela kokuhamba komsebenzi:
Ummi ukuba oko akufunayo yimpendulo (inkqubo),
Ngubani ogunyazisa ukuba afune ukummisela (ubume bendawo),
uyilo luphendula uyilo (Model BIM to be),
umakhi uphendula kwisiphumo (isicwangciso, uhlahlo-lwabiwo mali, iiplani),
abathengisi abaphendula kuluhlu lwegalelo (imigaqo),
isuphavayiza ephendula kwiziphumo zokugqibela (BIM njengemodeli eyakhiweyo).
Kucacile ukuba ukuba neemodeli zonxibelelwano ezihlanganisiweyo kufuneka zenze lula abalamli, ukuze bakwazi ukuzenzekelayo ukungqinisisa ukuba kwiimeko ezilungileyo kukuzenzela inkonzo yomsebenzisi wokugqibela; Okanye ubuncinci, obonakalayo kunye nokulandeleka, kuncitshiswe kumanyathelo amancinci. Ekugqibeleni, into efunekayo ngummi kukuba afumane ugunyaziso nokwakha; Ngelixa urhulumente avumayo ngokwemigaqo yakhe kwaye afumane ulwazi lobume bokugqibela. Ke, unxibelelwano phakathi kweemodeli zangaphambili-ngasemva zeofisi kuphela kwezi ngongoma zintathu, zongeza ixabiso.
Umnini uqhubeke nolwakhiwo ebelulindele, uRhulumente uqinisekisile ukuba umsebenzi wenziwe ngokuhambelana nemigaqo kwaye ngaphandle komzamo omkhulu oqinisekisiweyo wokugcina ulwazi lwakhe luhlaziywa. Umahluko wenzelwe kuphela injongo.
Nangona umtshutshisi, umyili kunye nomthengisi wezixhobo ixabiso elongeziweyo ezinye izinto; kodwa ngendlela efanayo ubudlelwane kufuneka bube lula.
Ukuba siyibona ngokwembono yemodeli, esi sicelo sisenzileyo kulwakhiwo sinokumiswa ngokufanayo kwiinkqubo ezifanayo: ukuthengiswa kwepropathi, ukubambisa, isicelo semali mboleko, iphepha-mvume lokusebenza kwishishini, ukuxhaphaza izibonelelo zendalo, okanye ukuhlaziywa yesicwangciso sokucwangciswa kwedolophu. Umahluko ukwimiba efana nezinga kunye neendlela; kodwa ukuba banemodeli efanayo yesizinda, baya kuba nakho ukunxibelelana.
Amawele edijithali, afuna ukuba yimodeli evumela ukubeka emgangathweni kunye nokudibanisa imiboniso ephindaphindayo, kumanqanaba okwahluka komhlaba, ubude bexeshana kunye neendlela.
Yintoni esinokuyilindela kwi-Gemini Imigaqo.
Umzekelo wangaphambili yimeko elula esetyenzisiweyo kulawulo phakathi kommi kunye negunya; kodwa njengoko kubonisiwe kwimihlathi yokugqibela, iimodeli ezahlukeneyo kufuneka zidityaniswe; Ngaphandle koko ikhonkco liya kuqhekeka kwelona khonkco libuthathaka. Ukuze oku kwenzeke, kufuneka ukuba inguqu yedijithali ibandakanye yonke indawo eyakhiweyo ngokubanzi, ukuze ukusetyenziswa okungcono, ukusebenza, ukugcinwa, ukucwangciswa kunye nokuhanjiswa kweeasethi zesizwe nezasekhaya, iinkqubo kunye neenkonzo ziqinisekisiwe. Kuya kufuneka izise izibonelelo kuluntu luphela, uqoqosho, iinkampani kunye nokusingqongileyo.
Okwangoku, owona mzekelo ukhuthazayo yi-UK. Ngesindululo sayo seMigaqo-siseko yeGemini kunye nemephu yendlela; Kodwa ngaphambi kokuba sibhale iitshomi ukuba zihlale zichasene nemeko yangoku kunye nembali yabo yokuhlala besenza yonke into ngendlela eyahlukileyo kodwa eyalelweyo. Kude kube namhla, iMigangatho yaseBritane (i-BS) inefuthe eliphezulu kwimigangatho enomgangatho wamanye amazwe; apho umsebenzi wamanyathelo akhoyo anje nge-i3P, ICG, DTTG, UK BIM Alliance iyahlonitshwa.
Ngokuhambelana noku kuqinisekileyo kwe-United Kingdom, simangalisiwe koko kuqaliswa yiDigital Framework Working Group (DFTG), edibanisa amazwi aphambili kurhulumente, ezemfundo nakwishishini ukufikelela kwisigqibo malunga neenkcazo ezisisiseko kunye neenqobo ezisemgangathweni. Isikhokelo esiyimfuneko sokuxhasa inguqu yedijithali.
Ngomongameli ophethe uMark Enzer, i-DFTG ityikitye inzame ezinomdla ekwenzeni iNkqubo-sikhokelo eqinisekisa ulawulo olufanelekileyo lolwazi kuyo yonke indawo eyakhiweyo, kubandakanya ukutshintshiselana ngeenkcukacha. Lo msebenzi, ukuza kuthi ga ngoku, unamaxwebhu amabini:
Ezi zikhokelo kumaxabiso "wolwazi" lwesakhelo solawulo lolwazi, olubandakanya imigaqo eyi-9 ehlanganiswe kwii-axes ezi-3 ngolu hlobo lulandelayo:
Injongo: Ukulunga kukawonke-wonke, ukudalwa kwexabiso, umbono.
Ithemba: Ukhuseleko, ukungafihli nto, ekumgangatho.
Umsebenzi: I-Federation, Ukuphilisa, ukuvela kwindalo.
Esi sisicwangciso esibekwe phambili sokuphuhlisa isakhelo solawulo lolwazi, ngemijelo emi-5 egcina ubukhosi beGemini ngendlela yokudlulisela.
Umjelo ngamnye kule milambo unendlela yawo ebalulekileyo, kunye nemisebenzi edibeneyo kodwa exhomekeke komnye; njengoko kubonisiwe kwigrafu. Le misinga yile:
Fi kelela, kunye ne-8 ebalulekileyo kunye ne-2 engabalulekanga. Isitshixo kuba inkcazo yayo iyimfuneko ukuvula amandla.
Ulawulo, kunye nemisebenzi emi-5 ebalulekileyo kunye ne-2 engabalulekanga. Ngumsinga oxhomekeke kancinci.
Eqhelekileyo, kunye ne-6 ebalulekileyo kunye ne-7 imisebenzi engabalulekanga, yeyona nto ibanzi kakhulu.
Abasebenzisi, kunye nemisebenzi emi-4 enqabileyo kunye ne-6 engafunekiyo, nonxibelelwano oluninzi nolawulo lweenguqu.
Guqula, I-7 imisebenzi ebalulekileyo kunye ne-1 engabalulekanga. Okwangoku indlela yayo ebalulekileyo ngumtya oqhubayo.
Njengoko kunokuchongwa kulo mda, ayijoliswanga nje e-UK njengotshintsho lwayo lwedijithali iBrexit, okanye ukuthanda kwayo ukuqhuba kwendlela yasekhohlo. Ukuba ufuna ukukhuthaza imodeli yokudibanisa amawele edijithali anokufikelela kuzwelonke, kuya kufuneka uphakamise into enokuthi ihambelane nomzi mveliso, ngakumbi ngokwemigangatho. Ezi zinto zilandelayo zigqamile malunga noku:
1.5 Ukulungelelaniswa namanye amanyathelo.
Iimpawu zentsingiselo zalo nto zingaphezulu kwaneleyo, ukuhlonipha ukubheja; Imigangatho ye-ISO, imigangatho yaseYurophu (CEN), ulungelelwaniso ne-Innovate yase-UK, i-SMART yokwakha, i-W3C, i-BIM UK, i-DCMS, i-I3P, i-DTTG, i-IETF.
4.3 Ukufikelela kwilizwe liphela.
Apha sithetha ngokuchonga nokulawula indawo yokungena neenkqubo, amanyathelo kunye namathuba kwimeko yezizwe ngezizwe kunye ne-synergies. Okubangela umdla, kukuba babe nakho ukuqaphela kwabo ukufunda ngeendlela ezilungileyo zamazwe esele bezama; kubandakanya ukubakho kokudibanisa iqela lotshintshiselwano lolwazi lwamanye amazwe, kubandakanya i-Australia, New Zealand, Singapore kunye ne Canada.
Uxwebhu lwe-hembrional olubizwa ngokuba yi-Gemini Principles, ukuba lufezekise isivumelwano esiphambili phakathi kweenkokeli eziphambili zeshishini, luya kuba yinto "Cadastre 2014" ekupheleni kweminyaka yee-2012, eyaseka imiba yefilosofi yolawulo lomhlaba, eyathi kamva i-Consensus isebenze kunye namanyathelo afana ne I-INSPIRE, i-LandXML, i-ILS kunye ne-OGC, yaba ngumgangatho we-ISO-19152 kwi-XNUMX, eyaziwayo namhlanje njenge-LADM.
Kule meko, kuya kuba ngumdla wokubona indlela iinkokheli eziphezulu kumzi-mveliso wethekhnoloji ezizise iimodeli ezizalisekisa ukuvumelana; Kwimbono yam ethile, ziphambili:
Iqela le-SIEMENS - iWindows - Microsoft - Topcon, ethi ngendlela yenze imeko ephantse ibe ngokupheleleyo kumjikelo we-Geo -unjineli; ukubamba, ukuhambisa imodeli, uyilo, ukusebenza nokudibanisa.
Iqela le-HEXAGON -inesethi yezisombululo ezifanayo kunye nomda onomdla kwipothifoliyo esekwe kwezolimo, impahla, ukuhamba ngenqwelomoya, ukhuseleko, ukhuselo kunye nobukrelekrele, ukumbiwa kwezemigodi, ezothutho kunye norhulumente.
Iqela leTrump -ogcina ngokulinganayo kwezi zimbini zangaphambili, kunye neenzuzo ezininzi zokuma kunye nokuhlangana kunye neqela lesithathu, njenge-ESRI.
Iqela le-AutoDesk-ESRI ukuba kwiinzame zamvanje zama ukongeza iiphothifoliyo zezentengiso ezizezona ziphambili.
Kananjalo abanye abadlali, abanamanyathelo abo okuqala, iimodeli kunye neemakethi; kunye nabo bafuna ukucacisa inxaxheba yabo kunye nokuvumelana. Umzekelo, umbane ngokubanzi, iAmazon okanye i-IRS.
Ke, njengaxa utata wayendise kwi-rodeo ukuze ndibone indlela iinkomo ezilawula ngayo inkunzi yenkomo, ebuhlanti bethu asinakukhetha ngaphandle kokuqaphela oko sikubonayo. Kodwa ngokuqinisekileyo iya kuba yitumente enkulu, apho leyo ifezekisa imvumelwano inkulu, apho ukulungelelaniswa kongeza ixabiso elingaphezulu kwamanqaku ezabelo engxoweni.
I-BIM ibe nefuthe eliphakamileyo kunye nokuqhubeka ngexesha elinokwenzeka, kungengakuba inceda kulawulo lwedijithali lweemodeli ze-3D, kodwa ngenxa yendlela ekwakuvunyelwene ngayo ziinkokeli ezinkulu zokwakha, ezobunjineli kunye nezemizi-mveliso yokwakha.
Kwakhona, umsebenzisi wokugqibela akangazi izinto ezininzi ezenzeka kwigumbi elingemva kwemigangatho; njengomsebenzisi we-ArchiCAD onokuthi sele eyenzile ngaphambi kokuba abizwe ngokuba yi-BIM; ngokuyinene kuyinyani, kodwa umda njengendlela yokufundisa kumanqanaba 2 kunye ne-3 aya ngaphaya kolawulo lwengcaciso eguqukayo, kwaye ijolise ekusingatheni ukusebenza kunye nemijikelezo yobomi hayi kuphela kwiziseko zoncedo kodwa kunye nomxholo.
Emva koko kuza umbuzo. IBIM ayanele?
Mhlawumbi umahluko omkhulu wento ecetyiswa ngamawele edijithali kukuba ukudibanisa yonke into ayisiyonto nje yokudibanisa ulwakhiwo. Ukucinga kwiimeko zonxibelelwano zehlabathi kuthetha ukuba iinkqubo zokudibanisa ezingenayo imodeli yendawo. Ke, sikwinqanaba elitsha lokwandisa umxholo, apho kungekho mntu uya kuthatha indawo ayizalisekisileyo kwaye uya kuqhubeka nokuzalisekisa indlela ye-BIM, kodwa into ephezulu iya kuyithatha okanye iyidibanise.
Xa uChrit Lemenn wayefuna ukuzisa iCore Cadastre Domain Model kumgangatho wolawulo lomhlaba, kwafuneka ukuba abethe ibhalansi kunye nezikhokelo ezivela kwi-INSPIRE nakwikomiti yezobugcisa kwimigangatho yokuma komhlaba. Ke siyafuna okanye asifuni
Kwimeko ye-INSPIRE, ISO: 19152 ngumgangatho wolawulo lwe-cadastral,
Ngokumalunga nokudidi oluphezulu lwe-LADM, kufuneka bathobele imigangatho ye-OGC TC211.
I-LADM ngumgangatho owodwa wolwazi lomhlaba. Ngesi sizathu, nangona umgangatho weLandInfra ubandakanya loo nto, yaphuka ngokufuna izinto ezilula, kuba kukhethwa ukuba ube nomgangatho weziseko zophuhliso kunye nomhlaba, kwaye uzidibanise kwindawo apho utshintshiselwano lolwazi longeza ixabiso.
Ke, kwimeko yamaDijithali amawele, i-BIM ingaqhubeka nokuba yindlela elawula imigangatho yemodeli yeziseko zophuhliso; inqanaba 2, nakho konke ukuntsokotha kweenkcukacha kuyilo kunye nemfuno yokwakha. Kodwa ukusebenza kunye nokudityaniswa kwenqanaba lesi-3, kuya kuthwala imeko elula ngakumbi eya kumdibaniso wexabiso elongeziweyo kwaye ungafuni ukuba yonke into mayithethwe ngolwimi olunye.
Kuya kubakho okuninzi ukuthetha; Ixabiso ledatha, ukophula izithintelo, ulwazi oluvulekileyo, ukusebenza kwamasiseko, indalo ephumelelayo, ukusebenza ...
"Ukuhlangana kweziseko zophuhliso ezikrelekrele, iindlela zokwakha zale mihla kunye noqoqosho lwedijithali zinika amathuba okuphucula umgangatho wobomi babemi"
Ngubani na olawula iqela labadlali abaphambili emva kwale filosofi, ukuqonda ukubaluleka kokulunga koluntu, uqoqosho, uluntu kunye nokusingqongileyo ... baya kuba nezibonelelo ezikhulu.
IGoogle Latitude, Ukuhlasela kwamfihlo?